Akụkọ - Dirk Sorenson: Ụzọ anọ ụlọ ọrụ nwere ike isi tinye echiche ha na ịga nke ọma
Industrylọ ọrụ igwe kwụ otu ebe na-apụta site na uto na-enwetụbeghị ụdị ya. Ọ kwụsịrị 2021 na ijeri $ 8.3 na ahịa US, nke dị 45% dị elu karịa 2019 ma e jiri ya tụnyere 2020 n'agbanyeghị mbelata 4% na ego ha nwetara.
Ndị na-ere ahịa na ndị na-emepụta ihe ga-edobe anya ha na atụmatụ anọ dị mkpa ga-eduga ụlọ ọrụ ahụ na afọ ọzọ dị ukwuu na 2022: njikwa ngwa ahịa, ịkwalite ọnụ ahịa, itinye ego n'ụdị isi, na inweta uru ndị ọzọ site na ire ahịa.
Dị ka otu n'ime ụdị igwe igwe kachasị ukwuu, azụmahịa igwe eletrik (igwe eletrik) ga-eto 39% kwa afọ na 2021 ruo $ 770. N'ile anya na ọnụ ọgụgụ ndị ahụ, e-igwe kwụ otu ebe na-ere ahịa igwe kwụ otu ebe, nke dara na $ 599 nde. .Ma igwe kwụ otu ebe na igwe ụmụaka ga-agafe $1 ijeri na ahịa na 2021. Otú ọ dị, ma edemede hụrụ otu-dijit ibelata na ahịa.
Notably, some of these sales declines has less to do with demand and more to do with inventory.Some bike category simply don't have enough inventory available during key sales months.Effective inventory management in key bike edemede ga-anọgide na-abụ ebe nke. lekwasịrị anya ka ụlọ ọrụ na-aga n'ihu na-aga n'ihu n'ime afọ ndị ọzọ.
NPD Retail Tracking Data data, nke gụnyere data ngwa ahịa sitere na ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe kwụụrụ onwe ya, na-egosi na ụlọ ọrụ ahụ nwere ngwaahịa zuru oke dị iji kwado uto na 2022.Ụdị ngwaahịa ụfọdụ, dị ka igwe kwụ otu ebe n'ihu nkwusioru ugwu, nwere okpukpu abụọ ọkwa ngwa ahịa ha na Disemba 2021. Anyịnya igwe kwụ otu ebe bụ ihe dị iche, dịka ọkwa ngụkọ ngwaahịa nke Disemba 2021 dị 9% dị ala karịa ọkwa 2020.
Ihe a na-ewu ugbu a n'ahịa ahịa igwe kwụ otu ebe na-etolite n'ihe ụfọdụ ndị ọkachamara n'ihe banyere akụ na ụba na-akọwa dị ka anụ ehi - ụkọ mbụ nke ọkọnọ na-akpọnwụ, nke na-eduga n'ịba ụba, nke na-eduga n'ịba ụba.
Dị ka e kwuru n'elu, mmetụta net nke bullwhip na-enye ohere nke abụọ maka ụlọ ọrụ ahụ: pricing. Ọnụ ahịa azụmaahịa n'ofe ụdị igwe kwụ otu ebe ga-abawanye site na nkezi nke 17% na 2021. N'inye ihe ịma aka ya pụrụ iche, ọnụahịa nke igwe kwụ otu ebe bilitere. 29% karịa afọ kalenda. Mmụba a bụ n'ezie ka a ga-atụ anya ya, dịka mbelata ọkọnọ na-ebutekarị ọnụ ahịa dị elu.
Site n'inweta ngwaahịa dị mma na ahịa, yana mmasị ndị na-azụ ahịa na ịgba ígwè, ụlọ ọrụ ahụ na-ebuli elu maka nkwalite amamihe, ịlụ ọgụ maka ọnụ ahịa kacha mma, na-abawanye uru maka ndị na-ebubata ya na ndị na-ere ahịa, na-arụ ọrụ iji mee ka ndị na-ere ahịa dị ọcha ọdịnihu nke ngwaahịa.
Akụkụ anọ nke ga-erite uru site na ntinye ego na nlebara anya na-aga n'ihu bụ igwe e-igwe, igwe gravel, igwe kwụ otu ebe nkwusioru ugwu, na ndị na-enye ọzụzụ na rollers.
N'ihi na e-igwe kwụ otu ebe Atiya, nke hụrụ afọ-na-afọ ibu kemgbe ụbọchị m jere ije site n'ọnụ ụzọ NPD fọrọ nke nta ka afọ asaa gara aga, ulo oru mbo ohere abound.New aghụghọ, belata akụrụngwa prices na metụtara ala nkezi ere ahịa, na a Ndị na-azụ ahịa na-eto eto na ndị gụrụ akwụkwọ na-arụtụ aka na ọ ga-aga n'ihu na-aga n'ihu n'ụdị ịnyịnya ígwè.
Nhazi gravel na igwe kwụ otu ebe na-egbo mkpa ndị ahịa dị iche iche ma nwee ike rụtụ aka na nkà ihe ọmụma imewe izugbe nke ụlọ ọrụ ahụ kwesịrị ịnakwere. Ụdị agbụrụ ma ọ bụ ọrụ kpọmkwem na-adaba na ihu ọma ka ndị na-azụ ahịa na-atụgharị n'ịnyịnya igwe na-agbanwe agbanwe nke ha nwere ike ịnya ebe ọ bụla na nke ọ bụla. elu.
Ndị na-enye ọzụzụ na ndị na-agbagharị agbagharị na-enye ohere dị iche iche. Ndị na-azụ ahịa egosila na ha enweghị mmasị itinye aka na mgbatị ahụ, ma ekwuru na NPD Consumer Survey na ha chọrọ ka ọ dị mma.
Akụrụngwa mgbatị ahụ nke ụlọ gụnyere ndị na-enye ụgbọ ala na ndị na-agbagharị igwe nwere ike ugbu a na-enye ahụmahụ na-emetụ n'ahụ na nkasi obi nke ụlọ anyị, na ngwakọta nke eziokwu mebere na mma dị nso n'akụkụ.
N'ikpeazụ, data NPD na-egosi na enwere ike ịnweta ohere ahịa ndị ọzọ site n'ịre ngwaahịa mgbakwunye, gụnyere okpu agha, mkpuchi igwe kwụ otu ebe na ọkụ, na ngwa ndị ọzọ. Ego ndị sitere na ịzụ ahịa okpu agha gbadara 12% na 2021, okpukpu atọ maka ụlọ ọrụ ahụ. n'ozuzu ya. Nke a na-egosi ohere ndị na-ere ahịa na-ere okpu agha n'akụkụ igwe igwe, nke na-emebeghị.
Ka ndị na-agba ịnyịnya na-amalite iji igwe kwụ otu ebe maka ebumnuche njem ọzọ, anyị nwere ike ịtụ anya uto na akụkụ ngwa ahịa nke ahịa.
Oge nzipu: Mar-04-2022
Nhazi igwe kwụ otu ebe, Pink Balance igwe kwụ otu ebe, Igwe igwe / igwe kwụ otu ebe 20 inch, Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe Igwe 12 inch, Ụmụ agbọghọ Balance Bike, Womens Mountain Bike,